compound Sulfachlorpyridazine ဆိုဒီယမ် Powder - တရုတ် NCPCVET
က NAME: ခြံဝင်း Sulfachlorpyridazine ဆိုဒီယမ် Powder ဖွဲ့စည်းပုံ: 1000g: sulfadiazine ဆိုဒီယမ် 625g + trimethoprim 125g CHARACTER: ဒီထုတ်ကုန်အလင်းအဝါရောင်အမှုန့်သည်။ PHARMACOLOGICAL: ဒီထုတ်ကုန်အများဆုံး Gram-အပြုသဘောဘက်တီးရီးယားနှင့်အပျက်သဘောဘက်တီးရီးယားအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အထိခိုက်မခံဘက်တီးရီးယားပတျဝနျးကငျြဖောလစ်အက်ဆစ်၏အားသာချက် ယူ. မသွားနိုင် Sulfa မူးယစ်ဆေးဝါး, သာ, activat tetrahydrofolate ၏ဘက်တီးရီးယား dihydrofolate synthase ပေါင်းစပ်၏အခန်းကဏ္ဍကို p-aminobenzoate နှင့် dihydropteridine ကိုသုံးနိုင်သည် ...
1000g: sulfadiazine ဆိုဒီယမ် 625g + trimethoprim 125g
ဒီထုတ်ကုန်အများဆုံး Gram-အပြုသဘောဘက်တီးရီးယားနှင့်အပျက်သဘောဘက်တီးရီးယားအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Sulfa မူးယစ်ဆေးအထိခိုက်မခံဘက်တီးရီးယား, ပတျဝနျးကငျြဖောလစ်အက်ဆစ်၏အားသာချက် ယူ. မသွားနိုင်မှသာ p-aminobenzoate နှင့် dihydropteridine ကိုသုံးနိုင်သည်, tetrahydrofolate ၏ဘက်တီးရီးယား dihydrofolate synthase ပေါင်းစပ်၏အခန်းကဏ္ဍကို, အ purine အတွက် tetrahydrofolate activated, Thymidine ပေါင်းစပ်တစ်ဦး၏အပြောင်းအရွှေ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ ကာဗွန်အုပ်စုသည်။ p-aminobenzoic အက်ဆစ်အလားတူဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ Sulfa မူးယစ်ဆေးဝါး, p-အမိုင်နို benzoic အက်ဆစ်, ဘက်တီးရီးယား dihydrofolate synthase နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင် dihydrofolate များ၏စုပေါင်းဆီးတား, နောက်ဆုံးမှာ nucleic အက်ဆစ်, ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားခြင်းနှင့်မျိုးပွား၏တားစီး၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ Sulfa မူးယစ်ဆေးဝါးများပြည်နှင့်တစ်သျှူးပျက်ပြားထုတ်ကုန်များအပြင်လည်းဘက်တီးရီးယားကြီးထွားမှု, နှင့် sulfa မူးယစ်ဆေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိုပေးနိုင်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သော procaine, tetracaine ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကို p-aminobenzoate မူးယစ်ဆေးဝါးများသို့ metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်နိုင်ပါတယ်။
sulfa antibacterial မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ မွေးမြူရေးနှင့်ကြက် Escherichia coli နှင့် Pasteurella ရောဂါကူးစက်ဘို့။
အဓိကအားဖြင့်ယင်းသို့မတည့်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်စူးရှသောတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်, နာတာရှည်တုံ့ပြန်မှု neutropenia, thrombocytopenia, အသည်းပျက်စီးမှုကို, ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ဗဟိုအာရုံကြောအဆိပ်အတောက်အဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ အလွယ်တကူအထူးသဖြင့်တဲ့အခါအချိန်ကြာမြင့်စွာဆေးမြင့်မားဆေးများကိုပိုမိုကျရောက်နေတဲ့, ဆီးထဲမှာအပ်နှံ။
ထုတ်ကုန်ရန်။ ခံတွင်း: တနေ့သော 1kg ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်, ဝက်, ကြက် 32mg; ဝက်, တစ်ကြိမ်5မှ 10 ရက်အတွင်း; ကြက်သား, တစ်ကြိမ်3မှ6ရက်။
(3) ဆီးလမ်းကြောင်းအတွက် Crystal precipitate ရန်လွယ်ကူမွေးမြူရေးသောက်သုံးရေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားပေးသင့်ပါတယ်။ high-ထိုး, ရေရှည် application ကိုဆိုဒီယမ်ဘိုင်၏တူညီသောငွေပမာဏကိုပေးထားရပါမည်။
(4) ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုအာရုံချို့ယွင်း, နှေးကွေးနေမစင်, သတိနဲ့အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
(5) ရေရှည်ဆေးဝါးလျှော့ချဗီတာမင် B နဲ့ဗီတာမင် K သည်များ၏ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်စုပ်ယူမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်, အူလမ်းကြောင်းသစ်ပင်ပန်းမန်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်, သက်ဆိုင်ရာဗီတာမင်မှဆက်ပြောသည်ရပါမည်။
(6) sulfa မူးယစ်ဆေးဝါးများမှဓာတ်မတည်နှင့်အတူလူနာအတွက်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဝက်4ရက်, ကြက်သား2ရက်။
(2014) ကုသရေးဆေးဝါး GMP လက်မှတ်အမှတ် 150
ယခင်: compound Amoxicillin Powder
နောက်တစ်ခု: Doxycycline Hyclate အဲဒီပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ Powder
တိရိစ္ဆာန် Antibacterial မူးယစ်ဆေးဝါး
တိရိစ္ဆာန်သည် Antibacterial မူးယစ်ဆေး
Injection သည် Antibacterial ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား
ကုသရေးသည် Antiparasitic မူးယစ်ဆေးဝါး
Dogs ကိုများအတွက် Dewormer
ခွေး Fenbendazole Dewormer
Dogs ကိုကြောင်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Dewormer ဆေးပညာ
Neomycin sulfate အဲဒီပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ Powder
Albendazole နှင့် Ivermectin Powder
Doxycycline Hyclate အဲဒီပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ Powder
ပျော်ဝင်မှုန့် Tiamulin Fumarate